Maleeshiyaad ka tirsan Alshabaab oo lagu dilay Gobollada Baay iyo Jubbada Hoose – Radio Daljir
Maleeshiyaad ka tirsan Alshabaab oo lagu dilay Gobollada Baay iyo Jubbada Hoose
Oktoobar 16, 2018 8:31 b 0
Howlgal dhanka cirka ah oo ay si wada jir ah u fuliyeen ciidamada Kumaandooska Soomaaliya iyo kuwa Mareykanka ee Africom ayaa lagu khaarijiyay maleeshiyaad ka tirsanaa koxda Alshabaab,kaasi oo ka dhacay deegaanno ka tirsan gobolka Jubbada Hoose.
War qoraal ah oo ka soo baxay taliska militariga Mareykanka Afrika ee Africom ayaa lagu sheegay in duqeyntaasi ay ka dhacday deegaanka Araare ee gobolka Jubbada Hoose,islamarkaana lagu dilaya ilaa 4 ka tirsanaa maleeshiyada Alshabaab.
Sidoo kale waxaa warkaasi lagu sheegay in aanay jirin wax khasaare ah oo shacabka ka soo gaaray howlgalkaasi qorsheysnaa oo lagu beegsanayay meelaha ay ku dhuumaalaysanayeen Alshabaab.
Dhinaca kale 8-ka tirsan Maleeshiyada Al-shabaab ayaa lagu dilay hawlgal qaybta 60-aad ee ciidanka Xoogga dalku ay ka fuliyeen deegaanka Daynuunaay ee gobolka Baay.
Howlgalkaasi ayaa ka dambeeyey kadib markii maleeshiyaad ka tirsan Alshabaab ay weerar ku soo qaadeen saldhig ay lahaayeen ciidamada dowladda oo kuyaala deegaankaasi.
Madaxwaynihii hore ee dowladda faderaalka Xasan Sheekh oo dowladda ugu baaqay siyaasad furfuran